Sigstr: सिर्जना गर्नुहोस्, लागू गर्नुहोस्, र तपाईंको ईमेल हस्ताक्षर अभियानहरू मापन गर्नुहोस् Martech Zone
Sigstr: सिर्जना गर्नुहोस्, लागू गर्नुहोस्, र तपाईंको ईमेल हस्ताक्षर अभियानहरू मापन गर्नुहोस्
सोमबार, डिसेम्बर 4, 2017 सोमबार, डिसेम्बर 11, 2017 Douglas Karr
तपाईको इनबक्स बाहिर पठाइएको प्रत्येक ईमेल मार्केटिंग अवसर हो। जब हामी हाम्रो न्यूजलेटरलाई टोन ग्राहकलाई पठाउँदछौं, हामी दैनिक २०,००० ईमेलहरू दैनिक सञ्चारमा स्टाफ, ग्राहकहरू, सम्भाव्यहरू, र सार्वजनिक सम्बन्धका पेशेवरहरू बीच पछाडि पठाउछौं। सबैलाई सोध्नु एक सेतो कागज वा आगामी वेबिनार प्रमोट गर्नको लागि ब्यानर थप्न आमतौरमा थोरै सफलता संग मिल्छ। अधिकांश व्यक्तिहरूले अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दछन्, अरूले लि mess्क गडबडी गर्दछन्, र मानिसहरूले वास्तवमा कल-टु-एक्शन क्लिक गर्लान् भने कहिल्यै प्राप्त गर्दैनन्।
यदि तपाइँ ईमेल हस्ताक्षरहरू महत्त्वपूर्ण छ भनेर विश्वास गर्नुहुन्न भने यस आँखा ट्र्याकिंग हिटम्याप विश्लेषणबाट जाँच गर्नुहोस् नेत्रहीन.
यो कहाँ छ सिग्स्ट्र भित्र आउँछ! Sigstr ले तपाईंको ईमेल हस्ताक्षर अभियानको केन्द्रीय प्रबन्ध प्रदान गर्दछ जहाँ सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई तुरून्त अपडेट गर्न सकिन्छ। अभियान छवि छवि अपलोड गरेर वा पाठ प्रविष्ट गरेर निर्माण गर्न सकिन्छ। तपाईका कर्मचारीहरूले कोडको एकल लाइन सम्पादन गर्नुपर्दैन - तपाईको मार्केटिंग टीमले उनीहरूले चाहेको बखत अभियान बदल्न सक्छन्।
Sigstr ले मोबाइल र डेस्कटपको लागि एक अभियानको आदर्श संस्करण दुबैको पूर्वावलोकनको साथ रेन्डर गर्दछ। र अवश्य पनि, Sigstr सरल प्रदान गर्दछ विश्लेषण अभियान हेराई गरिएको संख्या प्रदर्शन गर्नका साथै अभियान वा कर्मचारीद्वारा क्लिकहरू पनि प्रदर्शन गर्न!
Sigstr ले समूहहरू सिर्जना गर्न पनि अनुमति दिन्छ। यो एक उत्तम सुविधा हो किनकि तपाईको समर्थन टोलीको लागि एउटा समूह हुनसक्दछ एक नयाँ उत्पादन प्रस्तावलाई बढावा दिने अभियानमा, जब तपाइँको कर्पोरेट भर्ती समूहलाई एक क्यारियर पृष्ठ अभियानमा तोकिन्छ, जबकि तपाइँको बिक्री टोलीले रिटर्नमा सेतो कागज प्रमोट गर्दैछ। तपाईंको समाधानको लगानीमा!
यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई समूहमा थप्न अनुमति दिन्छ र त्यसपछि प्रत्येक समूहलाई एक विशेष अभियानमा थप्न सकिन्छ! म यस बारे मा धेरै उत्साहित थियो सिग्स्ट्र कि हामीले तत्काल साइन अप गर्यौं - र यो हाम्रो कर्मचारीहरू भर प्रयोग र व्यवस्थापन गर्न लायक छ।
Sigstr ईमेल हस्ताक्षर एकीकरण
कुनै पनि ईन्टरप्राइजमा Sigstr सरल प्रयोग गरीरहेको छ किनकि तिनीहरूसँग अब सक्रिय डाइरेक्टरी, आउटलुक, एक्सचेन्ज, अफिस Google Su365, गुगल सूट, जीमेल र एप्पल मेलको साथ एकीकरण छ।
ऐन अन - तपाइँको एक्ट-अन ईमेल संचारको लागि सिगस्ट्र हस्ताक्षर र अभियान थपेर एक्ट-अन भित्र तपाइँको मार्केटिंग प्रयासहरू बृद्धि गर्नुहोस्।
Hubspot - Sigstr सँग पनि एकीकरण छ Hubspot जहाँ तपाईं कुनै पनि सिंक्रोनाइज गर्न सक्नुहुन्छ Hubspot स्मार्ट सूचि र एक विशिष्ट Sigstr एबीएम अभियान को लागी असाइन गर्नुहोस्, समयरेखा घटनाहरू यसमा हेर्नुहोस् Hubspot जब ती क्लिक गर्दछन्, स्वत: बनाउनुहोस् Hubspot सम्पर्कमा कसले ईमेल गर्दछ, र ईमेल हस्ताक्षर अन्तर्क्रियाहरू लागू गर्न सक्रिय Hubspot कार्यप्रवाह!
मार्केटो - मार्केटो स्मार्ट सूचि र ल्यान्डि Pages पृष्ठहरूको साथ तपाईंको हस्ताक्षर मार्केटिंग प Al्क्तिबद्ध गर्नुहोस्। तपाईं मार्केटो ईमेल टेम्पलेटहरूको साथ हस्ताक्षरहरू एकीकृत गर्न सक्नुहुनेछ।
SalesForce - तपाईंको हस्ताक्षर मार्केटि .लाई बिक्री बल अभियानहरू र रिपोर्टहरूको साथ मिलाउनुहोस्। तपाईं दृश्य फोर्स टेम्प्लेटहरूको साथ हस्ताक्षरहरू एकीकृत गर्न सक्नुहुनेछ।
सेल्सलोफ्ट - तपाईंको Cadence ईमेल संचारहरूमा Sigstr हस्ताक्षर र अभियान थप्दछ
Pardot - Pardot अभियानहरू र रिपोर्टहरूको साथ तपाईंको हस्ताक्षर मार्केटि Al पंक्तिबद्ध गर्नुहोस्। तपाई Pardot ईमेल टेम्पलेटको साथ हस्ताक्षर एकीकृत गर्न सक्नुहुनेछ।
एक सिग्स्टर डेमो अनुरोध गर्नुहोस्
टैग: ऐन अनएक्टनएक्टन ईमेल हस्ताक्षरहरूब्यानरइमेल अभियानइमेल हस्ताक्षरईमेल हस्ताक्षरआँखा ट्रैकिंगहीटम्यापहबस्पटहबस्पट ईमेल हस्ताक्षरहरूमार्केटोमार्केटो ईमेल हस्ताक्षरहरूमाफ गर्नुहोस्pardot ईमेल हस्ताक्षरबिक्री बल ईमेल हस्ताक्षरहस्ताक्षरsigstr
Best उत्तम अभ्यासहरू तपाइँले अनुसरण गर्नुपर्छ जब एक सदस्यता रद्द पेज बनाउने